सेल्फी अब थप आकर्षक : ओप्पोद्वारा नेपालमा ए३७को ब्ल्याक एडिशन सार्वजनिक - Living with ICT
Home / Featured / सेल्फी अब थप आकर्षक : ओप्पोद्वारा नेपालमा ए३७को ब्ल्याक एडिशन सार्वजनिक
Shiva Basnet Aug 27, 2017	Leaveacomment
काठमाडौं, भदौ ११ – ओप्पोले नेपाली उपभोक्ताका लागि आफ्नो सेल्फी एक्स्पर्ट ए३७लाई कालो रंगमा उपलब्ध गराएको छ । आफ्ना उपभोक्तालाई क्यामेरा फोन मार्फत पृथक अनुभव दिने सोचका साथ ओप्पो ए३७ कालो रंगमा उपलब्ध गराएको हो । सार्वजनिक गरिएको नयाँ एडिशनमा परिस्कृत कलरओएस ३.०का साथै २ उच्च कार्यसम्पादन क्षमता सहितका क्यामेरापनि जडान गरिएको छ । मूल्य रु. १५ हजार ५ सय ९० निर्धारण गरिउको ओप्पो ए३७ नेपाली बजारमा सर्वत्र उपलब्ध गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
A37 Black Side
‘उपभोक्ताको माग र तिनको सन्तुष्टि हाम्रा लागि सदैव प्राथमिकताको विषय हो । ओप्पो ए३७ पहिलो पटक गोल्ड (सुनौलो) रंडमा सार्वजनिक गर्दा देखि नै यसलाई कालो रंगमा पनि उपलब्ध गराउन उपभोक्ताले अनुरोध गरिरहेका थिए ।’ ओप्पो ए३७को उपलब्धताको घोषणा गर्दै ओप्पो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनी जीले भने ‘हामी ओप्पो ए३७लाई नयाँ आकर्षक कालो रंगमा उपलब्ध गराउन पाउँदा निकै हर्षित छौँ ।’
ओप्पो ए३७ले न्यून प्रकाश भएका स्थानमा समेत आकर्षक सेल्फी अनुभव प्रदान गर्ने क्षमता राख्छ । फोनमा रहेको ५ मेगा पिक्सेल क्षमताको फ्रण्ट क्यामेरामा १÷४ ईञ्च सेन्सर र आफ्नो मूल्य श्रेणीमै सर्वाधिक ठूलो १÷४ म्यूएम पिक्सेल सहितको ओम्निबीएसआई+ (ब्याकसाइड ईल्लुमिनेशन) उपलब्ध गराएको छ ।यसले प्रकाश समवेदनशिलता बढाई फोटोमा न्वाइज घटाउन उल्लेख्य मात्रामा सघाउँछ ।
डिस्प्लेको माध्यमबाट फ्ल्यास फाल्ने प्रविधि अर्थात् स्क्रिन फ्ल्यास फिचरको सुविधा सहितको यो फोनले जुनसुकै अवस्थानमा प्राकृतिक तथा उज्यालो सेल्फीको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । आफ्ना लाखौँ उपभोक्ताबाट प्राप्त सुचनाका आधारमा फोनमा रहेको ब्यूटिफिकेशन फिचरलाई थप परिस्कृत गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
नयाँ फोनले ७ भिन्न ईन्टेलिजेन्ट ब्यूटिफिकेशन सपोर्ट गर्नुका साथै भिन्दा भिन्दै स्किन टोनलाई दृष्टिगत गर्दै २ छुट्टै मोडपनि उपलब्ध गराएको छ । यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो उत्कृष्ट पाटो उजागर गर्न उल्लेख्य मद्दत गर्छ ।
ए३७मा १÷३.२ ईञ्च ब्याक ईल्लुमिनेटेड सेन्सर र १.४ म्यूएम पिक्सेल क्षमता सहितको ८ मेगा पिक्सेलको रियर क्यामेरा उपलब्ध छ । फ्रण्ट क्यामेराले झैँ यसले पनि प्रकाश सम्वेदनशिलता बढाउँदै न्वाइज घटाउन उल्लेख्य सघाव पु¥याउँछ । साथै, यसमा रहेको क्यामेराले तस्विरलाई तस्विरमा रहेका कमी कमजोरी हटाउँदै जिवन्त दृष्य खिच्न समेत सहयोग गर्छ ।
त्यसैगरी, फोनमा अल्ट्रा–एचडी मोडको सुविधापनि उपलब्ध छ । यो मोडले लगातार ५ तस्विर खिचेर तिनमा रहेका उत्कृष्ट पाटो मात्र समाहित गरी जीवन्त रंग र विवरण सहित २४ मेगा पिक्सेलको तस्विर कैद गर्न सघाउँछ । हात तन्काएर सेल्फी लिने प्रयास गरिरहँदा अनजानमै हलचलका कारण धमिलो फोटो आउने समस्याको समाधानका रुपमा ए३७मा पाम सटल फिचरपनि उपलब्ध रहेको छ ।
यो फिचरको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले फ्रण्ट क्यामेरामा तिर हत्केला हल्लाएकै भरमा तस्विर लिन सक्छन् । साथै, थप सहजताका लागि यसमा आफ्नो आवश्यता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने टाइमरको ब्यवस्था समेत रहेको छ । फोनमा ९ आकर्षक फिल्टर र सुटिङ मोडको ब्यवस्थापनि रहेको छ । साथै, सृजनसिलता र स्टाइललाई बढावा दिने सोचका साथ फोनमा डबल एक्स्पोजर र स्लो सटर लगायत सुविधा पनि रहेका छन् ।
Previous साइबर सुरक्षामा जनचेतना फैलाउदै डा. रामहरि सुवेदी
Next MI ब्राण्डका मोबाइलमा १ वर्षको निःशुल्क इन्सुरेन्स, दसैंतिहारमा हात खाली नजाने उपहार